Wasiirka Ciyaaraha Wadanka Taliyaaniga Oo Sheegay In Bisha May Ay Noqon Doonto Dib Ugu Soo Laabashada Tababarka Serie A? | Malcab.com Wararka Ciyaaraha
Wasiirka isboortiga ee dalka Talyaaniga Vincenzo Spadafora ayaa rajeynaya inuu cadeeyo in bisha May ay tahay 4-ta taariikhda dib ugu soo laabashada tababarka Serie A sida ugu dhakhsaha badan.
Horyaalka Serie A ayaa si kumeel gaar ah loo hakiyey bishii March, ka dib markii kulamada qaar lagu ciyaaray albaabada xidhnaa, sababtoo ah cudurka faafa ee coronavirus, oo galaaftay nolosha in kabadan 145.500 adduunka.
Xiriirka Kubadda Cagta Talyaaniga (FIGC) ayaa horey u sheegay in ololaha uusan dib u bilaaban doonin illaa iyo inta la dammaanad qaadi karo caafimaadka iyo amniga dadka ay khuseyso oo dhan.
Dowladda Talyaanigu waxay kordhisay xayiraadaha adag ee ay hadda ku hayso dhaqdhaqaaqa iyo dhaqdhaqaaqa bannaanka illaa iyo 3da Maajo, in kasta oo ay soo baxayaan warar sheegaya in naadiyada qaarkood ay aad u jecel yihiin inay ku soo laabtaan tababarkaas, dib u bilaabaan ciyaari isla bishaas isla markaana la soo gabagabeeyo 2019-20 July.
Isaga oo suurta gal ah inuu tababarka dib u bilawdo bisha soo socota, Spadafora wuxuu u sheegay wariyeyaasha “Usbuucyada soo socda waxay aasaasi u noqon doonaan fahamka isbedelka xaaladda daryeelka caafimaadka iyo sida, haddii iyo goorta aan dib ugu soo laaban karno isboortiga heerarka oo dhan.
Waxaan rajeyneynaa inaan xaqiijino taarikhda 4ta May ee ku soo laabashada tababarka sida ugu dhaqsaha badan. Waxaan rajeynayaa inaan ilaashano taariikhdaas, xitaa hadii ay tahay kaliya tababarida albaabada xidhnaa.
“Xilligan la joogo, waxa kaliya ee aan dan ka leenahay waa inay tahay caafimaadka iyo nabadgelyada guud ee dadka.”
Kooxda difaacaneysa horyaalka Juventus ayaa hal dhibic ka sareysa Lazio ilaa iyo 26 kulan oo dib loo dhigay.
Talyaaniga oo weli xayiran ayaa diiwaangeliyay in ka badan 22,100 oo dhimasho ah iyo ugu yaraan 168,900 oo la xaqiijiyey kiisaska COVID-19.